2 Ahene 3 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Ahene 3:1-27
3 Ahab ba Yehoram+ bɛyɛɛ Israel hene wɔ Samaria, Yuda hene Yehosafat afe a ɛto so dunwɔtwe mu, na odii ade mfe dumien. 2 Ɔyɛɛ Yehowa ani+ so bɔne, to na anto ne papa+ ne ne maame de no; na Baal honi+ a ne papa yɛe+ no, oyi fii hɔ. 3 Nanso ɔfam Nebat ba Yeroboam bɔne+ a ɔyɛe a ɛmaa Israel nso yɛɛ bɔne+ no ho. Wantwe ne ho amfi ho. 4 Moab hene Mesa+ nso, na ɔwɔ nguan, na otuaa nguammaa mpem ɔha ne adwennini a wontwitwaa wɔn ho nhwi mpem ɔha maa Israel hene. 5 Na ɛbae sɛ bere a Ahab wui+ no, ɛhɔ ara na Moab hene tew Israel hene so atua.+ 6 Enti saa bere no, Ɔhene Yehoram siim fii Samaria kɔboaboaa+ Israel nyinaa ano. 7 Bio nso, ɔsoma kɔɔ Yuda hene Yehosafat nkyɛn sɛ: “Moab hene atew me so atua. Wo ne me bɛkɔ ne Moab akɔko?” Ɛnna ɔkae sɛ: “Mɛkɔ.+ Me ne wo nyinaa yɛ onipa biako. Me man ne wo man nso yɛ biako.+ M’apɔnkɔ ne w’apɔnkɔ yɛ biako.” 8 Afei obisaa no sɛ: “Ɔkwan pɔtee bɛn na yɛbɛfa so akɔ?” Na ɔkae sɛ: “Edom+ sare so kwan no.” 9 Israel hene ne Yuda hene ne Edom+ hene siim kɔe; wɔbɔɔ aporɔw twaa nnanson kwan, na na nsu nni hɔ mma dɔm no ne mmoa a wodi wɔn akyi no. 10 Ɛnna Israel hene kae sɛ: “Anyɛ yiye! Yehowa aboa ahene baasa yi ano sɛ ɔde wɔn rebɛhyɛ Moabfo nsa!”+ 11 Ɛnna Yehosafat bisae sɛ:+ “Yehowa diyifo biara nni ha anaa?+ Momma yɛmfa no so mmisa Yehowa.”+ Na Israel hene nkoa no biako buae sɛ: “Safat ba Elisa+ a na ɔde nsu gu Elia nsa so+ no wɔ ha.” 12 Ɛnna Yehosafat kae sɛ: “Yehowa asɛm wɔ n’anom.” Enti Israel hene ne Yehosafat ne Edom hene kɔɔ ne nkyɛn. 13 Na Elisa bisaa Israel hene sɛ: “Dɛn na me ne wo wɔ yɛ?+ Kɔ wo papa adiyifo+ ne wo maame adiyifo no hɔ.” Nanso Israel hene ka kyerɛɛ no sɛ: “Nka saa, efisɛ Yehowa aboa ahene baasa yi ano sɛ ɔde yɛn rebɛhyɛ Moabfo nsa.”+ 14 Ɛnna Elisa kae sɛ: “Sɛ́ asafo Yehowa a migyina n’anim no te ase yi,+ sɛ ɛnyɛ Yuda hene Yehosafat na mede m’ani ato n’anim a,+ anka merenhwɛ wo mpo na mahu wo.+ 15 Monkɔhwehwɛ sankubɔfo mmrɛ me.” Na bere a sankubɔfo no bɔɔ sanku+ no, Yehowa nsa+ baa no so. 16 Na ɔtoaa so kae sɛ: “Nea Yehowa aka ni, ‘Muntutu amoa wɔ subon yi mu baabiara;+ 17 na Yehowa aka sɛ: “Morenhu mframa, na morenhu sɛ osu retɔ; nanso nsu bɛhyɛ subon yi ma,+ na mobɛnom nsu afi mu,+ mo ne mo nyɛmmoa ne mo afieboa.”’ 18 Na eyi bɛyɛ ade ketewaa bi Yehowa ani so,+ na ɔde Moabfo bɛhyɛ mo nsa.+ 19 Kurow a wɔabɔ ho ban+ ne kurow pa biara, mommɔ no, na muntwa+ dua pa+ biara, na munsisiw nsu aniwa nyinaa, na momfa abo nsɛe asase pa biara.” 20 Na ɛbae sɛ anɔpa,+ bere a wɔbɔ aduan afɔre no,+ hwɛ! nsu fi Edom fam bae, na nsu hyɛɛ asase no so ma. 21 Moabfo nyinaa tee sɛ ahene no aba sɛ wɔne wɔn rebɛko. Enti wɔfrɛfrɛɛ mmarima, efi wɔn a wotumi kura akode+ so rekɔ nyinaa, na wokogyinagyinaa ɔhye so. 22 Bere a wɔsɔree anɔpahema no, owia tɔɔ nsu no so, na Moabfo a wogyinagyina ɔfã nohoa no hui sɛ nsu no ayɛ kɔɔ sɛ mogya. 23 Ɛnna wɔkae sɛ: “Mogya! Ahene no atotɔ nkrante ano; wɔakunkum wɔn ho. Enti Moabfo, monkɔfa asade!”+ 24 Bere a wɔbaa Israelfo nsra mu no, ɛhɔ ara na Israelfo+ no sɔre tow hyɛɛ Moabfo no so, na woguan fii wɔn anim.+ Ɛno nti wɔbaa Moabfo mu, na wɔreba nyinaa na wɔrekunkum Moabfo no. 25 Wɔbɔɔ nkurow+ no, na wɔn nyinaa totow wɔn abo guguu asase pa biara so de hyɛɛ so ma; wosisiw nsu aniwa+ nyinaa na wotwitwaa nnua pa+ nyinaa kosii sɛ ɛkaa Kir-Hareset+ abo nko wɔ hɔ; ataabo towfo kotwaa ho hyiae, na wofii ase sɛee no. 26 Bere a Moab hene hui sɛ ɔko no mu ayɛ den ama no no, ɛhɔ ara na ɔfaa mmarima ahanson a wokurakura nkrante sɛ ɔrekɔ Edom hene+ so, nanso wɔantumi. 27 Ɛnna ɔfaa n’abakan a obedi n’ade de no bɔɔ ɔhyew afɔre+ ɔfasu no ho. Na abufuw kɛse baa Israel so, na wofii ne ho kɔɔ wɔn asase so.
2 Ahene 3